Somaliland oo Xabsi dhigtay Nabadoonkii labaad oo caan ka ah Degaanadeeda [Akhriso sababta loo xiray] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Somaliland oo Xabsi dhigtay Nabadoonkii labaad oo caan ka ah Degaanadeeda [Akhriso sababta loo xiray] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Warark laga helayo magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa sheegaya in ciicamada amniga ay xabsiga dhigeen Nabadoon caan ah oo si kulul u weerarra waxqabadka iyo siyaasaddaha maamulka Muuse Biixi.
Nabadoon Suldaan Maxamuud Muuse (Nabadoon Cune) ayaa xabsiga Burco loo taxaabay xalay, iyadoo aan kiiskiisa wax faahfaahin ah laga bixin, iyadoo la sheegay in warkii ugu dambeeyay ee nabadoon Cune kasoo yeeray uu ahaa weerar uu ku qaaday wasiirka arrimaha Gudaha Somaliland, isgoo ku eedeeyay waxqabad la’aan colaadda Ceel Afweyn.
Maamulka Somaliland waxaa u xiran Nabadoon Boqor Cusmaan (Buurmadow) oo lagu eedeeyay inuu maamulkaasi aflagaado u geystay.
Previous articleDad ku dhintay Roobab ka da’ay Muqdisho [Isu socodkii oo xirmay & Imtixaanki Dowladda oo la baajiyey – Sawirro]
Next articleDAAWO: Muuqaaladii ugu danbeeyay Wadooyinka magaalada Muqdisho & Waxyeellada Roobabkii ka da’ay